တစ်ခုချင်းစီကိုကျောင်းသားပြည့်စုံကျောင်းကိုရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းအတွေ့အကြုံထွက်သယ်ဆောင်နှင့်နောက်ထပ်မြေပြင်၌စိုက်ပျိုးဘို့ပဲပေါက်ဖို့ဘယ်လိုသိရန်အလုပ်တစ်ခုရရှိသွားတဲ့။ ဒါဟာစမ်းသပ်မှုများသောအားဖြင့်ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေပါဘူး။ Bean ကိုအမြိုးအနှယျအပင်ပေါက်ရန်အတွက်အလွယ်တကူအစိုဓာတ်ကို, အလင်းနှင့်လေနှင့်အတူသူတို့ကိုပေးခွငျးအားဖွငျ့ပွညျ့စုံနေသည်။
တတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်အိမ်မှာကြောငျးအတှကျပဲအညှောက်ပေါက်ဖို့အတော်လေးလုပ်နှင့်အရည်အသွေးမျိုးစပါး။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာပြုမူနိုင်သည်
ပထမဦးဆုံးနည်းလမ်းတစ်ပြားချပ်ချပ်ပန်းကန်လိုအပ်တယ်, နှင့်ခတ်အထည်သို့မဟုတ်ချည်ပိတ်ကျဲစပါလိမ့်မယ်။ တစ်ပန်းကန်အင်္ကျီအထည်တွင် preselected စပါးကိုတငျပွီးလြှငျထိုသို့ဖောဖောသီသီခတ်စိုစွတ်ကြ၏, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့အစွန်းကျော်ထွက်မတ်တပ်ရပ်မပေးကြောင်းဒါအခန်းအပူချိန်မှာရေထဲသို့သွန်းလောင်းလေ၏။ ရေပြုတ်ကိုအသုံးပြုဖို့သို့မဟုတ်ခုခံကာကွယ်ဖို့ဦးစားပေးမည်ဖြစ်ပြီး, ရလဒ်အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချမှုအဘို့, သငျသညျတိုးတကျမှုက stimulator တစ်နည်းနည်းထပ်ထည့်နိုင်ပါတယ်။ အထည်တစ်ဦးအပိုဆောင်းအပိုင်းအစများနှင့်ဖုံးလွှမ်းပဲ၏မေတ္တာရပ်ခံချက်။ တစ်ပူနွေးရာဌာန၌တစ်ပန်းကန်ချပြီးအသုံးပြုပုံနက်ဖြန်နေ့၌သင်ကပထမဦးဆုံးထွင်းဖေါက်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ တစ်သျှူးများခြောက်သွေ့ကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့အဓိကအရာ, ရေထဲသို့ပဲမျိုးစုံပိုမိုစွဲငြိဖွယ်ရာ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အစားလိုချင်သော rostochku မျိုးစေ့ပုပ်ပျက်တတ်ရနိုငျသညျ။
ဒုတိယနည်းလမ်း။ Bean ကိုအတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်ကိုပထမဦးဆုံးအမှု၌ရှိသကဲ့သို့, ကျောင်းများအတွက်ပေါက်။ ဒီ Pre-မရွေးဘို့အစေ့နွေးရေထဲမှာနာရီအနည်းငယ်အဘို့အချထားပါသည်, ပြီးတော့အကြောင်းကို 0.5 လီတာတစ်အသံအတိုးအကျယ်နှင့်အတူဆေးကြောပြီးဖန်ခွက်၌ထွက်ထားကြ၏။ စွမ်းဆောင်ရည်တစ်ဝါဂွမ်းအထည်, ပိတ်ကျဲစသို့မဟုတ်ပေါကျကှဲအဖုံးနဲ့ဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့်သမားရိုးကျမှုန်ရေမွှား အသုံးပြု. လိုအပ်သောစိုထိုင်းဆကိုထိန်းသိမ်းရန်ရမည်ဖြစ်သည်။ ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ bean ကိုအညွှန့်ခြင်းနှင့်မြေ၌စိုက်ပျိုးဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
မြေဆီလွှာတွင်မစိုက်ပျိုးမီ bean ကိုမျိုးစပါးပေါက်ကိုတိုက်ရိုက်အပင်ပေါက်ရန်အတွက် accelerates နှင့်ပိုမိုအားကောင်းမြစ်များနှင့်အညွန့်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုအားပေးအားမြှောက်။ 1-1.5 စင်တီမီတာမစိုက်ပျိုးမီမြေဆီသို့ရောဂါပိုး၏အကောင်းဆုံးအရှည်။ ကြာကြာပိုးများကူးစက်ပါကအလွယ်တကူမတော်တဆချွတ်ကိုချိုးဖျက်နိုင်ပါတယ်။
Bean ကိုပျိုးပင်မြေဆီလွှာတွင်စိုက်ပျိုးကြသည်ချောင်ကြမ်းပြင်လီတာပလပ်စတစ်ခွက်သို့မဟုတ်ပန်းပွင့်အိုးတစ် 1.5 စင်တီမီတာနှင့်အတူ dropwise နှင့်ပြည့်၏။ ထိုအခါနေသာအရပ်ဌာန၌အိုး ထား. , အခါအားလျော်စွာခြောက်သွေ့မှမြေဆီကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းဖြင့်ရေတိုက်လေ၏။ ယခုပင်လျှင်စက်ရုံအပေါ်တစ်ဦးတစ်လပြီးနောက်ပထမဦးဆုံးပန်းပွင့်ပေါ်လာကြသည်။
သင်တို့သည်လည်းလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ် ဘုံဆား crystals ကြီးထွားဖို့ဘယ်လို, သို့မဟုတ်အခြားလုပ်ဆောင်သွားရန် အိမ်မှာဖျော်ဖြေမှုအတွေ့အကြုံကို။
ကလေး၏မရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ကျောင်းတစ်မှတ်ချက်ရေးသားဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ကျောင်းမှာရွှေတံဆိပ်ဆု - အခြေအနေများ
ဆယ်ကျော်သက် 14 နှစ်များအတွက်အားကစားပြိုင်ပွဲ
မိန်းကလေးများအဘို့အဂိမ်းများ - 18
မြီးကောင်ပေါက်အတွက် varicocele - လက်ရှိကုသ
Technique Rene Gilles
ရင်သားကင်ဆာ ultrasound လုပ်နေသည့်အခါ?
Pie ဖြည့်ပါ - pastries များအတွက်မူရင်းဖြည့်များ၏ဆုံးအရသာချက်ပြုတ်နည်းများ
Rapper Kanye West ဒါဝိဒ်သည် Bowie ၏လုပျငနျးအတွက် PR စနစ်မ
မှိုနှင့်အတူ lavash ကနေလိပ်
သမိုင်း၏ 15 အရှိဆုံးအံ့သြဖွယ်နက်နဲသောအရာ
Office ကိုဖက်ရှင် 2014
န့်ကိုမိတ်ဆက် - စာရွက်